Martigelinta websaydh si fudud macnaheedu waa hubinta në websaydhkaaga laga heli karo World Wide Web (WWW). Tan waxaa badanaa lagu Sameeyaa mid ka mes ah laba siyaabood. Waad iska bixin kartaa marti gelinta shirkad adeeg ama waad iskaa u marti qaadi kartaa naftaada kumbuyuutarkaaga – waxaan fiirin doonnaa labada qaab ee maqaalkan.
Sidee Websaydhku u Shaqeeyaa – Faylasha websaydhada – sida HTML, sawirada, fiidiyowyada, waxaa lagu kaydiyaa serveryo ku internet internet. Marka isticmaaleyaashu rabaan inay soo booqdaan websaydhkaaga, waxay kinwaanka websaydhka ku qori doonaan biraawsarkooda ka dibna kumbuyuutarradooda ayaa markaa ku xirnaan doona server-kaaga. Bogagga shabakaddaada ayaa markaa loo diri doonaa isticmaaleyaasha iyada oo loo marayo biraawsarka bogga.
1 Sida loo Marti Galiyo Goob Adeegsada Bixiye Martigeliya
1.1 1. Go’aanso nooca websaydhka aad dhiseyso
1.2 2. Isbarbar dhig Noocyada Martigelinta Websaydhada
1.2.1 Saddex pa o host host ah
1.2.2 WordPress? Prestashop? Magento? Martigelinta WooCommerce?
1.2.3 Wadaag V v / Cloud vs Dedikuar Hosting
1.3 3. Dooro oo Iibsato Qorshe Marti-gelin Webi
1.3.1 Marti-geliyaha Websaydhada loogu talagalay Newbies / Fudud Websaydha
1.3.2 Marti-geliyaha Websaydhka ee Ganacsiyada / Websaydhyada Koraaya
1.3.3 Marti-geliyaha Websaydha ee loogu talagalay Soo-saareyaasha / Përdoruesit e Avancuar
1.4 4. Domain Iibsiga iyo Qorshe
1.5 5. U dhaqaaq / Abuur Websaydhkaaga Adeegga
2 Sida Loogu Marti Galiyo Goob Deegaanka Ah
2.0.1 Faa’iidooyinka është-marti-gelinta
2.0.2 Qasaarooyinka është-marti-gelinta
2.1 1. Program kompjuterik Xulo Qalabka iyo
2.2 2. Hubso në Bandwidth ku filan
2.3 3. Soosaarista iyo Websaydhka Websaydhka
3 Xulasho noocee ah ayaa ugufiican inaad Marti Geliso Degelkaaga?
4 Maareynta Kheyraadka Martigelintaada
4.0.1 1. Dooro CMS-da khafiifka ah
4.0.2 2. Dood-wadaag – U adeegso miniBB baddalkii SMF
4.0.3 3. Isticmaal adeeg bixiyaha warsidaha-saddexaad
4.0.4 4. U shaqeeyaan nidaam qaas ah
4.0.5 5. Macluumaadka spam joogta ah oo joogto ah
4.0.6 6. Haddii ay suurtagal tahay, isticmaal xarumaha dibadda
4.0.7 7. Adeegso adeegyada martigalinta faylka saddexaad
4.0.8 8. Si joogto ah u soo qaado oo tirtir faylasha log
5 Websaydhka Martida Wejiga (FAQ)
5.1 Leximi dheeraad ah
5.1.1 Inbadan oo ku saabsan martigelinta degel
5.1.2 Faqja e internetit e Markaad abuurayso
Sida loo Marti Galiyo Goob Adeegsada Bixiye Martigeliya
Adeegsiga adeeg bixiyaha waa habka ugu fudud ee lagu martiqaado degel. Waxaad bixin kartaa ujro yar oo bilkasta ah waxaadna isku halleyn kartaa bixiyaha adeegga inuu daryeelo dhammaan qalabkaaga, kaabayaashaada, iyo baahiyaha kale ee la xiriira.
Faa’iidooyinka martigelinta bixiyaha adeegga
Badanaa waa ka raqiisan yihiin
Taageero ayaa badanaa la heli karaa
Looma baahna dayactirka qalabka
Qasaarooyinka marti gelinta adeeg bixiyaha
Waxaa laga yaabaa inay xadidaado adeegyo
Kala-doorbidyo ka yar goobaha martigelinta
Waa kuwan fotoabooyinka lagu martigeliyo degel leh adeeg bixiyaha martigeliyaha.
1. Go’aanso nooca websaydhka aad dhiseyso
Waxaa jira laba nooc oo websaydh ah; taagan iyo firfircoon.
Degello websaydh ah oo sahlan ayaa lagu dhisi karaa iyadoo la adeegsanayo dalabka Waxaad aragto Waa maxay waxaad helaysid (WYSIWYG) kadibna loo gudbiyo koontada martigelinta.
Goobaha firfircoon ayaa inta badan lagu dhaqaajiyaa barnaamijyada waxayna adeegsadaan qoraallada, kaydinta xogta, iyo aalado kale oo lagu abuuro qaybo ka mes ah goobta duulista. WordPress oho Joomla ayaa tusaale u ah barnaamijyada Caadiga ah ee Maareynta Maaddada (CMS) oo caan ku ah maanta. Kuva kida sida Magento iyo PrestaShop waxaa loo isticmaalaa websaydhka eCommerce.
Xulashada martigaliyaha webkaaga waxay kuxirantahay nooca websaydhka aad dhiseyso. Marti geliyaha websaydhka miisaaniyadda sida Soo-saare (0,99 $ / muaj) ku filnaan lahayd degel sahlan oo deg deg ah; halka goobo firfircoon dhe serveri juaj.
2. Isbarbar dhig Noocyada Martigelinta Websaydhada
Sida badan waxaa jira noocyo badan oo gawaari ah, martigelinta websaydhka ayaa waliba ku timaata dhadhan kala duwan. Tusaale ahaan, marti gelinta la wadaago ayaa ah ugu jaban oo ugu fudud ee lagu maareeyo – Waxay la mes yihiin baabuurta isku xidhan ee adduunka.
Sida nooca martigelinta websaydhku kor u qaaddo, ayaa sidoo kale kor u kaca kharashka ku lug lahaa iyo inta badan kakanaanta adag ee maareynta xisaabta martigelinta. Tusaale ahaan, gudaha VPS hosting waxaad u baahan doontaa inaad maamusho oo keliya faahfaahinta martigelinta laakiin sidoo kale deegaanka aad ku martiqaadayso.
Saddex pa o host host ah
Isku soo wada duuboo, noocyada ugu badan ee marti gelintu waa
Marti gelinta VPS / Cloud
WordPress? Prestashop? Magento? Martigelinta WooCommerce?
Waxaa muhiim ah in la ogaado in codsiyada websaydhka iyo martigelinta websaydhadu aysan aheyn wax la mid ah. Kur jeni në mes të martigaliyayaasha në internet, ju lutem dëshironi për WordPress Hosting, PrestaShop Hosting, WooCommerce Hosting, dhe wixii la mesi ah. Kuvani runtii maahan noocyo marti ah, laakiin waxaa loogu talagalay inay soo jiitaan dadka laymen ee laga yaabo inaysan aqoon u lahayn shuruudaha martigelinta webka ee dhabta ah. Martigaliyayaashani waxay soo bandhigaan kaliya adeegsadayaasha magacyada barnaamijyada caanka ah ee websaydhka.
Tusaale ahaan, baba badani ma ogan karaan farqiga u dhexeeya noocyada martigelinta, laakiin qaar badan baa aqoonsan doona ereyga ‘WordPress’.
Nooca marti-gelinta websaydhka ee aad u baahan doontid waxaa caadiyan lagu qeexaa:
Cabbirka taraafikada aad ka filaysid websaydhkaaga, ama
Wixii baahiyo gaar ah oo websaydhkaagu lahaan karo.
Badi websaydhada hadda bilaabanaya waxay caadi ahaan leeyihiin mugga taraafikada oo hooseeya (tusaale booqdayaal tiro yar) iyo xisaabaadka martigalinta la wadaago ayaa ku fiicnaan doona kuwaas. Inta badan akoonada la wadaago ayaa sidoo kale la imaan doona barnaamij rakibayaal (sida Softaculous), laakiin si loo hubiyo në baahiyahaaga la daboolay, weydii marti-qaadka haddii dalabka aad rabto lagu rakibi karo koontaadad aad.
Wadaag V v / Cloud vs Dedikuar Hosting
Marka la eego waxqabadka iyo maaraynta, nooc kasta oo marti-gelinta websaydhku wuxuu kaloo leeyahay faa’iidooyin iyo khasaaro u gaar ah markaa dooro kuwaaga si habboon.
Hosting wadaago kishte iyo jeer waa raqiis waana fududahay in la maareeyo laakiin kuma yimaado kontaroolo horumarsan oo ma awoodo inuu xaddido baaxadda taraafikada. Waad giyo adeegyo martigelin la wadaago oo ka socda A2 Hosting, Soo dhaweynta, InMotion Hosting
VPS / Cloud Hosting wuu ka qaalisan yahay oo aad u ballaaran. Isticmaalayaashu waxay ku rakibi karaan ku dhawaad ​​wax kasta oo ay uga baahan doonaan koontadaas oo ay awoodaan inay la tacaalmaan baaxadda taraafikada ee kala duwan iyadoo ku xiran inta lacag ee la bixiyay. Waad awoodaa ka hesho VPS ama adeegyada martigelinta Cloud Badbaadada Digitalka, Interserver, SiteGround.
server heegan ah waa kuwa ugu murugsan in la maareeyo lagana bixiyo inta ugu badan. Iyagu waa kuwa aad u awood badan isla markaana maamulaya si toos ah illaa heer qalabka qalabka. AltusHost, Hosting për InMotion, Iyo TMD Hosting Dëshiron një adhurim të marti-gelin ah o heersare ah.
3. Dooro oo Iibsato Qorshe Marti-gelin Webi
Xitaa noocyada martigelinta, adeeg bixiyayaasha badanaa waxay leeyihiin qorshayaal kala duwan oo la heli karo. Farqiga ugu weyn ee qorshayaashan ayaa badanaa ku dhaca qadarka ilaha mid kastaa helo. Inta badan ee ilahaagu leeyahay, ayaa booqdayaal badan oo ay maareyn karto.
Marka ay timaado iso saabsan martigelinta websaydhada, waxaan caadiyan tixraacnaa seddex shay oo aasaasi ah – procesor (CPU), xusuusta (RAM), iyo kaydinta (HDD ama SSD). Kuvani si kastaba ha noqotee kishte iyo goor uma turjunto waxqabadka wanaagsan ee websaydhka shabakadda.
Waagii hore ma jirin hab sahlan oo lagu cabbiro waxqabadka martida webka. Isticmaalayaasha badankood waxay ku qasbanaadeen inay ku tiirsanaadaan dib u eegista taas oo nasiibdarro, caadi ahaan kaliya laga qaado sawiro waxqabadka martida ah oo aan badnayn cusboonaysiinta taas. Si aad uga gudubto tan, iskuday isticmaalka HostScore, oo ah goob si joogto ah u qiimeeya waxqabadka marti-geliyaha websaydhka oo ku saleysan xog uruurinta socda. Tani waxay ka dhigan tahay në qiimeyntooda waxqabadka martigeliyaha webka ay aad uga saxsan yihiin.
Sidoo kale iska ilaali astaamaha lagu soo kordhiyay qiimaha sida SSL bilaash ah, domain magac, dhibcaha xayeysiinta, dhismooyinka websaydhka ku jira, ama waxyaabo kale oo kaa caawin kara inaad dhisto ama suuq gasho gota.
Qaar ka mes ah martigaliyayaasha websaydhada ayaa sidoo kale bixiya faa’iidooyin kale oo ku saabsan qorshayaasha qaaliga ah sida kor u qaadista gaarka ah ama xoojinta. Tusaalayaal wanaagsan oo sidan ah waa qorshayaasha martigalinta la wadaago ee A2 Hosting. Qorshaha ugu qaalisan taksanahaas ayaa ah xawaare 20X ‘Turbo’ ah.
Sida caadiga ah isla marka aad iibsato martigeliyaha shabakadda, waxaad heli doontaa emayl soo dhaweyn leh oo leh faahfaahin ku saabsan diiwaangelinta gelitaankaaga iyo magaca magaca. Ku hay emaylkan meel aamin ah – waxaad u baahan doontaa macluumaadka si aad u dejiso qaybtaada oo aad u gasho gudiga kontaroolka kombuyuutarkaaga. Pamja e ekranit Ky është një program i mirë për hostPapa.
Kadib markii aan tijaabiyay oo aan dib u eegis ku Sameeyay in kabadan 60 adeeg oo marti gelinta ah, waxaan awoodey in aan yareeyo qaar xulashooyinka martigelinta ugu wanaagsan kiisaska kala duwan ee loo adeegsado.
Marti-geliyaha Websaydhada loogu talagalay Newbies / Fudud Websaydha
A2 Marti gelinta (isqorista 3.92 $ / muaj)
Martiyaha (isqorista 0,99 $ / muaj)
GreenGeeks (isqoritaanka 2,95 $ / muaj)
Marti-geliyaha Websaydhka ee Ganacsiyada / Websaydhyada Koraaya
InMotion Hosting (isqoritaanka 3,99 $ / muaj)
Gudaha galka (isqoritaanka 4 $ / muaj)
SiteGround (isqoritaanka 3,95 $ / muaj)
Marti-geliyaha Websaydha ee loogu talagalay Soo-saareyaasha / Përdoruesit e Avancuar
Kinsta (isqoritaanka 30 $ / muaj)
LiquidWeb (isqoritaanka 29 $ / muaj)
4. Domain Iibsiga iyo Qorshe
Meesha martigalinta webkaagu yahay meesha dhabta ah ee feylashaada websaydhku ku fadhiistaan, waxaad ubaahantahay domain magac si ay adeegsadayaashu uhelaan goobtaada. Magacia magjike wuxuu u dhaqmaa sida cinwaankaaga WWW. Sida kinwaannada dhabta ah, mes kastaaba waa u gaar.
Qorshayaal badan oo martigelinta websaydhada maanta ayaa la imaan doona magac domain bilaash ah, markaa hubi inaad hubiso haddii taasi ku habboon tahay martigelinta websaydhka aad damacsan tahay inaad iibsato. Hadday sidaas tahay, waad daryeeli kartaa magaca domain isla waqtiga aad bixinaysid qorshahaaga martigelinta webka.
Haddaysan ahayn, waad u baahan tahay iibsato magac domain gooni ah. Tan waxaa lagu samayn karaa isla meeshii aad ka soo iibsatay qorshaha marti-gelinta ama adeeg-bixiye kale. Haddii dhe ubaahantahay inaad iibsato magaca domainka si gooni ah, waxaan kugula talinayaa inaad meel kale raadsato.
Domain Magacyada ma aha shey qiimo go’an leh badanaana mënyrë iibiyaan. Bixiyeyaasha qaarkood badiyaa waxay leeyihiin iibsiyo raqiis ah magacyada domain oo haddii aad nasiib ku leedahay waxaad mid uga soo qaadan kartaa xatooyo. Tusaale ahaan inta badan magacyada magacyada waxaa lagu bixiyaa ilaa 98%.
Waxaa taas ka reeban haddii aad tahay qof markii ugu horreysay milkiile bog leh. Markaa, iibsashada magaca domain iyo martigelinta isla adeeg bixiyeha ayaa kuu fududeyn kara waxyaabo kuu fudud inaad la shaqeyso bilow ahaan.
5. U dhaqaaq / Abuur Websaydhkaaga Adeegga
Domain marxhdi magacaaga iyo qorshaha martigelinta websaydhadu ay diyaar u yihiin waa tahriib. Guuritaanka goobta waxay noqon kartaa mid dhib badan, sidaa darteed hadaad tan Sameyso markii ugu horeysay, caawimaad weydiiso martidaada cusub. Bixiyeyaasha adeegga martigelinta qaarkood ayaa bixiya socdaalka goobta bilaashka ah.
Si të keni nevojë për blerje dhe shërbime InMotion Hosting, Mashruuca AMP> Hawlgallada Xisaab> Uebfaqja Codsiga Bedelka. Halkan riix si aad u bilowdid hijrada xorta ah ee InMotion hadda.
Kjo është ajo që ju duhet të keni (Maximum Leagueaga) (kombiyuutarkaaga) që ka nevojë për fudud ugu wareejiso faylalkayaga server-kaaga shabakadda. Si ju lutem dhe ju do të adeegsan kartaa Maareeyaha faylka ee gudiga xakameynta martigelintaada webka ama waxaad ku wareejin kartaa adoo adeegsanaya macmiilka FTP.
Hawshu waxay la mid tahay inaad ku Sameysatid feylasha hal meel ilaa meel kale kombiyuutarkaaga.
Sida Loogu Marti Galiyo Goob Deegaanka Ah
Martigelinta degel deganeed micnaheedu waa inaad tahay nuxurka adoo isticmaalaya meesha aad iska leedahay si aad u იგივეysato shabakad shabakad kana xoqeysa. Tan macnaheedu waa inaad adigu mas’uul ka tahay wax kasta oo ka socda qalabka iyo softiweerka illaa iyo bixinta xadka loo yaqaan ‘bandwidth’ iyo baahiyaha kale ee kaabayaasha ah.
Xakameyn aad u sarreysa oo ka jirta deegaankaaga martigelinta
Suurtogalnimada waqtiyada adeegga degdegga ah
Doorashada qalabkaaga iyo adeeg bixiyayaashaada
Adi ayey qaali u noqon kartaa
Sikur iyo jeer suurtagal maahan deegaannada la deggan yahay
Digniin: Marti gelinta websaydhyada degmadu waa mid adag oo aad qaali u noqon kara. Waxay kaloo badanaa ka aamin santahay la-adeeggeeyaha adeeg-bixiyeyaasha.
1. Program kompjuterik Xulo Qalabka iyo
Qalabka kombiyuutarka ee aasaasiga ah wuxuu noqon karaa mid aad u la mid ah qalabka kombiyuutarkaaga gaarka kuu ah kala duwanaansho yar. Xaqiiqdii, farsamo ahaan, waad qaadan kartaa PC-gaaga (laptop ama xitaa) waxaadna u rogi kartaa shabakadda shabakadda guryaha haddii aad runtii doonaysid.
Farqiga ugu weyn ayaa ah sida aad ugu kalsoon tahay inaad u rabto websaydhkaagu inuu ahaado iyo mugga booqdaha ay xamili karto. Sida bixiyeyaasha adeegga, waxaad u baahan doontaa inaad isha ku hayso procesor-ka, xusuusta, iyo meelaha wax lagu kaydiyo.
Haddii aad dooratid qalabka server-ka dhamaadka-dheer server rack server, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad hubiso in baahiyaha gaarka ah ee qalabkan la buuxiyay. Tan waxaa ku jira booska, qaboojinta, iyo awoodda.
Muunad ka mes serverit SMB SMB (Ilo)
Haddii aad u baahan tahay in adeeggaagu noqdo mid lagu kalsoonaan karo waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad tixgeliso dib-u-cusboonaysiinta qalabka. Tusaale ahaan, ku wadida gawaaridaada kaydinta RAID, oo ay weheliso muraayadaha firfircoon ee dib-u-kaydinta gawaarida kale.
Qalabkaaga kale ee kaabayaasha sida router iyo modem waxay sidoo kale ubaahanyi doonaan inay xamili karaan gawaarida xamuulka badan.
Softiweerka, marka laga reebo nidaamkaaga qalliinka waxaad u baahan doontaa inaad sidoo kale diiradda saarto qalabkaaga shabakadda (xilligan xaadirka ah, Apache iyo Nginx waa kuwa ugu caansan suuqa). Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad mas’uul ka ahaato ma aha oo kaliya isku-habeynta software-ka, laakiin sidoo kale shati-siinta.
2. Hubso në Bandwidth ku filan
Muuqaalka internetka ayaa sidoo kale muhiim u ah socodsiinta kumbuyuutarkaaga. Xaaladaha badankood, inteena badan waxaan ku fiicanahay xaddiga xaddiga internetka ee caadiga ah maadaama aan adeegsaneyno xiriiro xadidan oo xagga internetka ah. Bal ka fikir haddii 30 qof ay isku dayayaan inay isticmaalaan gurigaaga internetka isla waqti isku mid ah – taasi, iyo laga yaabee, inay tahay waxa aad raadineyso inaad taageerto.
Waxa kale oo loo baahan yahay in tixgalinta la siiyaa waa cinwaankaaga IP-ga. Intooda badan qorshooyinka internetka ee internetka waxay la imaanayaan IPs zjarri. Si të keni një faqe interneti, ju dëshironi të përdorni IP statike IP ah. Tan waxaa gacan ka geysan kara adeeg bixiye sida DynDNS ama adoo ka iibsanaya Adeeg Bixiyahaaga Internetka (ISP).
Baro sidii loo xisaabin lahaa xawaaraha aad u baahan tahay.
3. Soosaarista iyo Websaydhka Websaydhka
Qaybta xigta waxay la mes tahay waayo-aragnimada isticmaalka adeeg bixiyaha marti-gelinta websaydhka, marka laga reebo inaadan helin wax taageero ah. Faylashaaga websaydhku waxay u baahan yihiin in loo wareejiyo websaydhkaaga shabakadda si goobtaadu u bilowdo inay u shaqeyso.
Xulasho noocee ah ayaa ugufiican inaad Marti Geliso Degelkaaga?
Sidaad sida muuqata ka sheegi karto labada tusaale ee halkan ku saabsan adeegsiga bixiyaha martigeliyaha ama iskaa-u-marti-gelinta websaydh, kan dambe ayaa si dhaqso leh u noqon kara qaali iyo dhib badan. Xaqiiqdii, waa (i rumeysta, waxaan horey u qabtay).
Marka laga soo tago qenacsanaanta aad qabatey, ma jiraan faa iidooyin dhab ah oo sidaas la yeesho haddii aadan ahayn ganacsi leh baahiyo aad u khaas ah oo goobtaada ah. Qaar ka mes ah kuwan waxay noqon karaan shuruudo sharci ama shirkadeed, tusaale ahaan.
Si kastaba ha noqotee, bixiyeyaasha adeegga martigelinta websaydhadu maanta waxay noqdeen kuwa aad u kalafiican xaaladaha badanaana waxay u furan yihiin inay macaamiisha kala hadlaan baahiyaha gaarka ah. Xaaladaha badankood në kastoo, isticmaalka qorshaha martigelinta caadiga ahi ay inta badan ka badan tahay mid ku filan.
Maareynta Kheyraadka Martigelintaada
Martigelinta degel – gaar ahaan haddii aad doorbideyso inaad ku martigeliso maxalligaaga, marna maahan hawl-qabad iyo illoobi. Maareynta Kheyraadka Maareynta waxay noqon doontaa mid aad iyo aad muhiim u ah marka shabakadahaaga caanka ahi koraan. Tani waa run gaar ahaan marka aad leedahay degello badan oo internetka oo isla martigelinaya isla barnaamijka.
Nëse ju doni të bëni shërbime të reja Marc Werne, ju do të gjeni një mesatare të linjës Linux Gigatux.com, duke kërkuar që të përdorni sa më shpejt që të keni servera-servera. Halkan waxaa ku yaal qaar ka mes ah talooyinkiisa ku saabsan sidii hantidaadu u dambayn lahayd.
1. Dooro CMS-da khafiifka ah
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isticmaasho Joomla or wax si xun, laakiin haddii istaartaada martigalinta ay ka yar tahay 500MB, waxaad ubaahan kartaa inaad dib uga fiirsato doorashadaada.
WordPress ose Drupal, tusaale ahaan, wuxuu Sameyn lahaa mid fudud, beddel kale oo rogrogmi kara oo ka badbaadin doona MB të diskut në disk dhe bandwidth. Inta badan waxyar ayaa ka sii culus oo culeyskiisu yar yahayna uma eka mes yar oo shaqeynaya. Samee jaantus waxyaabaha kale ooad derato ah oo waxaad doorataa CMS-ga badiyaa ku habboon baahiyahaaga iyo xirmadaada martigelinta.
2. Dood-wadaag – U adeegso miniBB baddalkii SMF
MiniBB kaliya waxay qaadataa wax ka yar 2 MB marka loo eego 10+ MB oo ah SMF, wali waa xalka gole dhameystiran oo ay kujirto kayd hilib ah oo lagu daro, kordhinta iyo galka.
Aan jeclayn miniBB?
Waxaa jira habab badan oo khafiif ah oo ka dhan ah qoraallada waawayn ee golaha. PunBB, FluxBB iyo AEF si a u u qeexaan dhowr. Sidoo kale, qorshee baaxadda shirarkaaga ka hor inta aanad dhejin xal kasta: haddii hadafku yahay inaad kumanaan kun oo macaamiishu gaarto, dib-u-hagaajinta xirmada martigelinta waxaa laga yaabaa in loo baahdo. Haddii aad rabto inaad ku sii hayso shaqaalaha golaha-kaliya ama loogu talagalay tiro yar oo ka mid ah dadka isticmaala, dhammaanteed waxaa loola jeedaa isticmaalka ilaha aad ka heshay faa’iidadaada.
3. Isticmaal adeeg bixiyaha warsidaha-saddexaad
Programet e përdorura nga faqja e internetit e lidhjeve të internetit të internetit do të publikohen nga faqja e internetit e telefonit tuaj falas. Dylli Nasiib darrose badan oo laga qaban karo ma jiraan, iyo qoraalka ugu yar ee wargeys ee la heli karo – OpenNewsletter – wali waa 640Kb waana inaad tirisaa dhammaan arrimaha kaydinta, sidoo kale.
Isbarbar dhig – MailChimp, xalka wargeys oo dhammeystiran oo ka bilaabanaya qiimaha eber haddii dhagaystayaashaada bartilmaameedka ahi ay ka yar yihiin 2,000 makaamiilleyda oad aad hiigsaneyso inaad dirto wax aan ka badnay.
Foomamka oo dhan waa la dejisan karaa markaa uma baahnid inaad adigu iskaa u martigaliso, oo waxaad warqadda isku dhex gelin kartaa Facebook.
Beddelka wanaagsan ee MailChimp waa Xiriir joogto ah iyo BenchmarkMail, oo xadkiisa kaliya la siinayo iyada oo la adeegsanayo ikhtiyaarada diiwaangelinta – dadku waxay iska qori karaan oo keliya foomkaaga.
4. U shaqeeyaan nidaam qaas ah
Inta badan milkiilayaasha ganacsiga yar yar iyo milkiileyaasha websaydhada gaarka ah ayaa leh miisaaniyad yar oo loogu talagalay xirmooyinka martigelinta ee la wadaago si looga badbaadiyo maalgashiga. Mararka qaar kor u qaadista Ayaa ah dariiq kasta oo daruuriga ah si loo kordhiyo waxqabadka Loona soo dhoweeyo dhagaysi ballaadhan Iyo taraafikada ay dhaliso, laakiin haddii aadan awoodin, waxaad badbaadin kartaa agabyada kombuyuutarka Adoo adeegsanaya nidaam qafis ah oo aan culeyska KA saarin CPU-gaaga.
Fjalëkalimi WordPress do të thotë se W3 Wadarta Cache do të mbahet në WordPress do të fillojë me ditët e sotme dhe do të hapet një hyrje në internet, duke u mbështetur në këtë faqe në WordPress. Tusaale ahaan, Joomla waa ku kalsoonaan karaa Nadiifiyaha Cache ose Jot Cache; halka Drupal uu leeyahay dhowr qalab oo waxqabadka waxqabadka ah sidoo kale.
5. Macluumaadka spam joogta ah oo joogto ah
Ju keni postuar email-e me spam foomka, blog-un e faallooyinka-s, URL-URL-në dhe adresën tuaj të internetit, nëse ju keni ardhur keq nga kambiyuutarkaaga dhe kootada xogta.
Samee Ugu Yaraan usbuucii hal mar si Adi UGA fogaato arrimaha xusuusta (tusaale Ahaan tirtirka tirtirka WordPress wuxuu kaliya Ka shaqeeyaa xusuusta 64MB, intaas Ka Dib waxaad ku Heli doontaa qalad Dilaa ah waxaadna ku badnaan doontaa ama Adi kordhin doontaa tirada xusuusta la oggol yahay ee ku jirta PHP.INI) feyl ama wp-config.php gudaha xididkaaga WordPress).
6. Haddii ay suurtagal tahay, isticmaal xarumaha dibadda
Haddii martigaliyahaagu u oggolaado isku xirka keydka mjegull, si kasta waa loo adeegsadaa. Kaydinta xogta dibedda waxay gacan ka geysaneysaa fududeynta adeegsiga qoondada websaydhkaaga sababta oo ah waxay kaydisaa waxyaabahaaga ka baxsan xisaabtaada martigelinta. Si kastaba ha noqotee, maanka ku hay in keydka keydka macluumaadka uu qaali noqon karo isla markaana dhibaato ugeysto dadka isticmaala dhamaadka.
7. Adeegso adeegyada martigalinta faylka saddexaad
Ku marti gali wax kasta oo lagala soo bixi karo adeegga marti-gelinta faylka ee dibedda, sida Photobucket, Vimeo, YouTube, 4Shared, Giphy, iyo wixii la mid ah.
Waa inaadan u oggolaanin booqdayaashaada, macmiishaada ama aqristayaashaada inay ku soo dhegaan nuxurka serverkaaga haddii hantidaadu xaddidan tahay.
8. Si joogto ah u soo qaado oo tirtir faylasha log
Diiwaanada log Ayaa loo sameeyay inay kugu wargeliyaan caafimaadkaaga mareegta, laakiin adeegsiga loomã adeegsan Karo kombiyuutarka: haddii aadan soo dejinin oo Adi Ka saarin Ugu Yaraan hal mar toddobaadki, cabirkoodu wuxuu u weynaan doonaa inuu qabsado dhowr megabajt Illaa GB. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay laba diiwaan oo cPanel:
/ guriga / user / public_html / error_log
/ guriga / user / tmp / awstats /
Faylka qaladka ayaa inta badan ku jira qaladaad firfircoon sida ღირსiinaha PHP, khaladaadka kaydinta xogta (ururinta sharci darrada ah, iwm) iyo faallooyinka spam ee ao soo dhexgalin. Fiiri faylkaan usbuuc kasta khaladaadka iyo ღირსiinaha, ka dibna iska saar.
Galka / awstats / dosje ,, liddi ku ah, waxaa ku jira dhammaan diiwaannada helitaanka iyo tirakoobka tirakoobka ee boggaaga. Waa inaad curyaamisaa barnaamijka AwStats ee ku Jira koontadaada si Aad UGA fogaato isticmaalka webspace iyadoo barnaamijku si otomaatig ah u keydinayo faylalka stat-ka, ama haddii aadan awood u yeelan karin xaddidnaanta xaddidan, waa inaad la xiriirtaa martiyahaaga oo Aad weydiisataa inaad curyaamiso dhammaan barnaamijyada falanqaynta.
Websaydhka Martida Wejiga (FAQ)
Martigelinta websaydhadu waa wax aan ka sahlanayn booska websaydhkaagu ku fadhiyo. Waxa kale oo ay ka kooban tahay baahiyaha iyo kharashaadka barnaamijyada kombiyuutarka, oo ay weheliso xaddiga loo yaqaan ‘bandwidth’ iyo tan oo ah baahiyo kale oo u baahan in la maare Faahfaahin dheeri ah – I sharaxay sida marti-geliyaha websaydhku u shaqeeyo hagehan.
Bixiyaha adeegga martigelinta iyo iskaa u-marti-gelinta: Maxay yihiin kala duwanaanshaha ugu weyn?
Bixiyeyaasha adeegga martigelinta websaydhadu waxay dejiyeen deegaanno u hibeeya martigelinta websaydhada. Iyaga ayaa loo habeeyay ujeedkan iyo sababta oo ah waxay ku Sameeyaan wax badan, waxay inta badan awoodaan inay ku bixiyaan adeegga si ka raqiisan jawiga is-marti-gelinta.
Ma u baahan tahay marti-weye websaydh?
Haa, martigelinta websaydhadu waa mid ka mes ah waxyaabaha muhiimka u ah socodsiinta degel. Si aad waxbadan uga baratid – Halkan waxaa ah liis ah shirkadaha ugu fiican ee martigeliya Waxaan ku taliyay.
Domain Magaca ma qasab baa in lagu maamulo mareegtayda?
Domaca Magaka waa kinwaanka websaydhkaaga. La’aanteed, isticmaaleyaashaada maheli doonaan jid ay ku galaan websaydhkaaga illaa ay garanayaan cinwaanka saxda ah ee IP-ga. Waxbadan ka baro sida magac domainku u shaqeeyo.
GoDaddy ma martisaa boggag internet?
Haa, GoDaddy waa adeeg bixiye websaydh oo mid ka mes ah alaabooyinkeeda ayaa ah martigelinta shabakadda.
Marti gelinta la wadaago ma ku filan tahay goobtayda?
Haddii websaydhkaagu cusub yahay, marti-gelinta la wadaago badiyaa waa ka badan tahay mid ku filan. Awooda wadajirka la wadaago ayaa ka duwan martigeliyaha martigeliyaha. Qaar ka mes ah martigaliyayaasha shabakadda, tusaale ahaan, SiteGround, leeyihiin qorshayaal aad u xoog badan xitaa xulashooyinka martigelinta la wadaago.
Immisa nooc oo marti-gelin ah ayaa jira?
Waxaa jira afer nooc oo waaweyn oo marti-gelinta websaydhada ah oo la wadaago, VPS, Cloud, iyo martigalin u heellan. Mid kastaa wuxuu bixiyaa heerar kala duwan oo waxqabadka, isku halleyn ah, iyo amniga.
Noocee marti gelinta ah ayaa ugu fiican?
“Waxa ugu fiican” dhe qaraabo ah – waxa u fiican bartayada mareegta ayaa laga yaabaa inaysan kuugu habboonayn adigu. Caadi ahaan haddii aad cusub tahay, marti-gelinta la wadaago waa inay noqotaa “meesha ugu wanaagsan” oo lagu bilaabo. Saamiyeyaasha heeganka leh ayaa ah noocyada ugu awoodda badan marti-gelinta laakiin aad ayey qaali u yihiin (sidaa darteed laguma talinayo in loo isticmaalo barnamijyo cusub).
Ju u adeegsan karaa WordPress martigeliyaha internetka?
Inta badan bixiyeyaasha adeegga martigelinta websaydhka ayaa maanta kuu oggolaanaya inaad rakibto noocyo kala duwan oo barnaamijyo caan ah webka. Tan waxaa badanaa ku jira WordPress, Drupal, Joomla, iyo qaar kale oo badan. Si loo hubiyo në dalabka aad rabto la rakibi karo waxaa ugu wanaagsan in aad ka hubiso adeeg bixiyahaaga.
Muxuu websaydhku u gaabiyaa?
Xawaaraha websaydhku wuxuu kuxiran karaa arrimo badan. Mid ka mes ah kuwan waa sida ugu habboon ee shabakaddaada loo hagaajiyo. Si të doni dhe sa më shumë, ju lutem bëni dyllë, kur jeni duke përdorur WebPageTest me GT Metrix. Ku tijaabinta imtixaanka halkan waxay burburin doontaa faahfaahinta waqtiyada culeyska, waxay awood kuu siineysaa inaad ogaato qodobbada aan fiicnayn ee waqtiga rarka boggaaga.
Sidee bay u shaqaysaa martigalinta websaydhku?
Martigelinta degel websaydhada waxaa ku jira shabakad shabakad oo loogu talagalay inay ugu adeegto faylalkaaga websaydhka booqdayaasha adduunka oo dhan. Qaybaha ugu muhiimsan ee ku lugta leh waa feylasha websaydhkaaga, websaydh, iyo magac domain kaas oo goobtaada laga heli karo.
Waa maxay marti gelinta daruurta?
Sida magacu u muuqdo, xisaabaadka martigelinta ee la wadaago ‘wadaaga’ ilaha keli keli ah. Marti gelinta daruuriga ah, macaamiisha badan ayaa kheyraadkooda galiya ” Cloud ‘agabyadanna markaa ayaa loo qaybiyaa akoonnada martigelinta Cloud.
Maxaa loo maareeyay martigalinta?
Marti gelinta la maareeyay waa nooc ka mid ah marti-gelinta websaydhka halkaas oo adeegbixiyaha uu mas’uul ka yahay sii wadidda waxqabadka farsamada ee koontadaada. Tani waxay badanaa ku koobnaan doontaa cusboonaysiinta farsamada iyo barnaamijyada software.
Inbadan oo ku saabsan martigelinta degel
Immisa ayey ku kacaysaa in lagu marti galiyo degelkaaga
Sida loo martiqaado degelkaaga bilaashka ah
Martigelinta websaydh si fudud macnaheedu waa hubinta in websaydhkaaga laga heli karo Համաշխարհային ցանց
Dünyada geniş şəbəkə (WWW) ilə veb-saytlara əlavə et. Tan waxaa badanaa lagu eynieyaa orta
互联网（WWW）中的Martigelinta websaydh si fudud macnaheedu waa hubinta。 Tan Waxaa Badanaa lagu sameeyaa mid ka
Martigelinta websaydh si fudud macnaheedu waa hubinta in websaydhkaaga laga heli karo World Wide
来源：magac domain，martigalin web，iyo degel horumaray。 Laakiin waa maxay magac域？ Waa maxay martigelinta shabakadda吗？ Miyaanay